na admin on 20-07-16
Hangzhou Intelligent Creative Technology Co, Ltd
Kubva pakagadzwa, IIC yakaendesa zvakabudirira mazana emaseti ezvigadzirwa zvemagetsi uye huwandu hukuru hwezvinhu zvinopesana nedenda kumazhinji epasi rese. Mune ramangwana, ICT ichashanda nemakambani ekuChina ekucheka-maburi automation kupa yakakwirira-yepamusoro, yepamusoro-te ...
Ndeapi makuru ekushandiswa kweLaser yekumaka muchina?
Laser yekumaka mashini inoshandisa laser matanda kumaka zvisingaperi mamakisi pane akasiyana nzvimbo. Ridza mhedzisiro yemakona kuburikidza kuburikidza nekumuka kwepasipasi evapace kuratidza yakadzika midziyo, saka yakavezwa yakarongedzwa mapatani, marogo uye zvinyorwa, laser yekumaka muchina inonyanya kugoverwa mukati, co2 laser yekumaka muchina, semicon ...
Hangzhou Intelligent Creative Technology Co, Ltd Musangano
Iyo kambani inoronga online inowanikwa pakati kudzidziswa masevhisi ekune dzimwe nyika anoshanda. IIC engineering timu inopa zano pamusoro pekuvaka zvidyarwa uye michina kutumira kune varo.
Mashini uye Sei mashandisi
na admin on 20-05-12
• Usati waisa mask, geza maoko ako newaini-based hand wipes kana sipo nemvura. • Dhavha mhino nemuromo nemaskhi uye ita chokwadi chekuti hapana maputi pakati pechiso chako nemaskhi. • Ngwarira kubata masiki panguva yekushandisa; kana uchidaro, shandisa doro-rakavakirwa ruoko kirimu kana sipo uye mvura ku ...
Kuzvidzivirira kubva pakupararira COVID-19
Unogona kuderedza mikana yako yekutapukirwa kana kuparadzira COVID-19 nekutora dzimwe nzira dziri nyore dzekuchengera: Gara uchinge wogeza maoko ako nechinwiwa-chinwiwa nedoro kana kuageza nesipo nemvura. Sei? Kushambidza maoko ako nesipo nemvura kana kushandisa doro-based ruoko rub kuuraya viru ...